Wasaaradda Caafimaadka oo shaacisay in qofkii ugu horeeyay uu u dhintay Coronavirus, lana helay afar kiis horleh - Tilmaan Media
Wasaaradda Caafimaadka oo shaacisay in qofkii ugu horeeyay uu u dhintay Coronavirus, lana helay afar kiis horleh
Wasiirka caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Drs Fowsiya Abiikar Nuur ayaa xaqiijisay in qof ka mid ah dadkii laga helay cudurka covid19 uu geeriyooday galabta.
“Ilaahay ha u naxariistee waxaan xaqiijineynaa geerida qofkii u dhintay cudurka COVID 19, Waxaa kaloo isla galabta la xaqiijiyay 4 xaaladood ee cudurka. Waa faafida bulshada dhexdeeda, Fadlan raaca talooyinka caafimaad si cudurka loo xakameeyo” ayay tiri wasiir Fowsiya.
Halkaan hoose ka Akhriso War-saxaafadeedka Wasaaradda Caafimaadka.
1. Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada iyada oo ka duulaysa waajibaadka ka saaran inay la wadaagto bulshada Soomaaliyeed hadba wixii ka cusboonaada caabuqa COVID-19, waxay umadda la wadaagaysaa qodobadan:
2. Waxay Wasaaraddu cadaynaysaa in uu bilowday faafitaanka cudurka ee bulshada dhexdeeda (community transmission)
3. Waxay wasaaraddu xaqiijisay maantay 4 xaaladood oo cusub oo la xariirta caabuqa COVID-19 taas oo tirada guud ee xaaladahada caabuqa COVID-19 ka dhigaysa 12
4. 4ta xaaladood oo cusub ayaa ah dad dhamaantood wadanka dhexdiisa joogay oo aan la laheyn xiriir dibadda
5. Waxaa sidoo kale geeriyooday Allaha u naxariistee xaaladdii ugu horraysay ee la xariirta caabuqa COVID-19, Somali 58 jir ah, kaas oo noqnaysa dhimashadii ugu horraysay wadanka gudihiisa
6. Waxaa kamid ah dadka laga helay cudurka 2 Sarkaal oo kamid ah shaqaalaha Wasaaradda Caafimaadka taas oo qasab ka dhigaysa dhammaan dadkii la shaqaynayay ama xariirka la lahaa inay karantiil galaan inta laga xaqiijinayo baaritaankooda
7. Wasaaraddu ku mashquulsantahay raadinta dadka ay xariirka la sameeyeen xaaladahaas cusub
8. Wasaaraddu waxay bulshada Soomaaliyeed mar kale ku adkaynaysaa inay guryohooda ku ekaadaan kana taxadaraan caafimaadkooda iyo badqabkooda
9. Fadlan inagala qayb-qaata xakamaynta cudurka oo raaca tilmaamaha caafimaad ee sida joogtada ah idiinla wadaagayso Wasaaradda Caafimaadka
Ururka Shaqaalaha Adduunka “ILO” oo kadigay dhibaato soo wajjihi doonta shaqaalaha caalamka
Guddoomiyaha Gobolka Sh/Hoose oo sheegay in uu dhow yahay xal ka gaarista colaadda Wanla weyn